Dibadbax lagu xusayey bixitaankii Al-shabaab oo maanta Muqdisho ka dhacay. – Radio Daljir
Agoosto 6, 2012 1:43 g 0
Muqdisho, Aug 06 – Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay dibadbax ay soo qaban-qaabisay dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, kaasoo looga gollahaa xusidda maalintii ugu horraysay oo ay Al-shabaab ka baxeen Muqdisho.
Bolaal qof oo dibadbaxayaal ah ayaa iskugu soo baxay qaar ka mid ah waddooyinka halbawlaha ah ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo watay boorar ay ku xardhan yihiin hal-ku-dhigyo ay ku muujinayeen dareenkooda ku aaddan bixiddii Al-shabaab ee sannad ka hor.
M/weynaha dawladda federaalka iyo mas’uuliyiin kale ayaa ka qaybgalay xuska maalintaasi oo ku astaysnayd 6-da bisha Agoosto, waxaana maanta loo dabaal-degayey sannad-guuradii 1-aad ee ka soo wareegtay xilligaasi.
M/weyne Shariif oo la hadlay bannaanbaxayaasha ayaa sheegay maalintaani in ay tahay mid xusid iyo maamuusid mudan, ayna tahay maalin dadka reer Muqdisho laga dulqaaday culays iyo ciqaab badan oo muddo dulsaarnayd sida uu tilmaamay madaxweynuhu.
Mudane Shariif, waxaa uu khudbadiisa maanta uu ugu mahadceliyey dawladihii ku gacansiiyey dawladda federaalka ka guulaysiga Al-shabaab, isagoo tilmaamay nabadaynta Muqdisho dad badan in ay la ahayd mid aan la suuragalin karin.
Dabaal-deggaan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhawr habeen ka hor magaalada Muqdisho lagu dilay maareeyihii garoonka diyaaradaha, ayna sidoo kale dhacaan dilal kale oo qorshaysan iyo iska-hor-imaaddo mararka qaar dhaca.